Man United oo dalab ka gudbisay Valverde…. (Ogoow JAWAABTA ay ka bixisay Real Madrid) – Gool FM
Man United oo dalab ka gudbisay Valverde…. (Ogoow JAWAABTA ay ka bixisay Real Madrid)
Haaruun December 12, 2021
(Manchester) 12 Dis 2021. Waxaa la warinayaa in Real Madrid ay diiday dalab dhan 60 million euros oo ay kooxda Manchester United ku doonaysay inay ku iibsato laacibka khadka dhexe reer Uruguay ee Federico Valverde, mana iibin doonto haddii aan laga soo gudbin qiimo intaas aad uga badan.
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay El Nacional, Manchester United ayaa xoojisay dadaalkeeda ku aadan xiisaha ay u qabto saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Uruguay xagaaga soo aadan, waxaana ay dalab u dirtay Real, taasoo isla markiiba laga diiday.
Waxaa la rumeysan yahay in sababta ay Real Madrid u diiday inay iibiso Valverde ay tahay in qiimahiisa suuqa uu ka badan dalabka ay hadda United-ka miiska soo saartay, waxayna codsanayaan ugu yaraan dalab gaaraya 80 million euros.
Tan iyo markii uu guulo waa weyn la gaaray kooxda koowaad ee Real Madrid dhowr sano kahor, Federico Valverde wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda aadka loogu kalsoon yahay ee Los Blancos, laakiin Modric, Kroos iyo Casemiro ayaa dib ugu soo laabtay inay si joogto ah uga qeyb qaataan kulammada kooxda, waxaana hoos u dhacday fursada uu ku heli karo line-upka naadiga.
23-sano jirkaan ayaa ku dhawaad ​​118-kulan la ciyaaray Real Madrid, wuxuuna u dhaliyay 5-gool, wuxuuna caawiyay 7-gool, taasoo soo jiidatay indhaha kooxo dhowr ah sida Manchester United.
Xiisahaan ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid si xoogan loo fahmi karo sababa la xiriira maadaama Manchester United aysan meesha ka saarin in xiddiga reer France ee Paul Pogba uu doonayo inuu baxo xagaaga, maadaama qandaraaskiisa kooxda uu galay lixdii bilood ee ugu dambeysay, Red Devils ayaa durba raadineysa bedelkiisa.
Macallin Mikel Arteta oo si gambasho la'aan ah u sheegay sababtii uu Pierre-Emerick Aubameyang uga reebay safka ciyaartii Southampton
Tababare Ralf Rangnick oo ku ammaanay mid ka mid ah xiddigahiisa guushii ay ka gaareen Norwich City